Mai Chibwe VekwaZimuto: Kuzora urume hweumwe murume pachombo.
Varume vanhu vanoshamisa chose. Unoona munhu akasvinura achitogwinyira kunyenga mukadzi waanoziva kuti ane murume kumba. Anenge achifunga kuti mukadzi uyu kana ari kumba kwake nomurume wake vanoitei ? Rega ndinbokurondedzera zviitiko zvemumba. Vanhu vakaroorana chero vasisadanani vanongorojana chete. Zvinobva pakuti vanovata vese. Pakunovata paya unokasira kuona kuti chombo nechitubu hazvina njere dzokuziva kuti matukana saka zvomboenda pa zororo. Zvine fungwa imwe chete inongoti kana tasangana ngatimhoresane.
Kozotizve kana murume apinza chombo haaregi kukoira kusvika akuisira guchu reurume mukati. Urume uhwu uchida usingadi hunoita mazuva matatu kana vhiki yese husina kufa hurimo chete. Hapana zvaunokwanisa kuita pazviri. Pedzezvo chikomba chouya chopinzawo chombo chacho imomo chombo chechikomba chozobuda chambozora urume hwemurume wako. Manheru iwawo murume opindawo makavhenganiswa hwake nehwechikomba. Mangwana ndizvozvo futi Murume, chikomba, murume, chikomba.
Apa ndiri kukuudza kuti murume wako anenge asingatozivi kuti mukadzi ari kuhura, asi chikomba chinoziva kuti mukadzi uyu mukadzi wemunhu uye akatozara urume hwemurume wake asi anongopinzawo chake ozvizora urume hwemurume wemukadzi obudisa oenda kumba kwake unorhoja mukadzi wake. Hapana kushata kwaanoona ipapo. Murume wemumba akazviziva anobva aramba mukadzi wake nokuda kwekusemeswa nezviri kuitika. Munhu anohi chikomba haana self respect. Ukaona wava kuzvirova dundundu uchiti nokuti uri kurhoja mukadzi wemunnhu, ziva kuti wangofanana nembwa zvayo isingahwisisi kuti pairi kupinza pakaipei. Kufunga kwangu ndekwekuti murume umwe noumwe ukamupa kapu yakazara urume hweumwe murume ukati tora uzore kumagaro kwako, anoramba, asi haarambi kunyika chombo chake imomo. Munopaonawo sei?
Ukaverenga zvinyogwa zvevarume vasingazivi kuti pakukwirana urume hunomira sei, unotoona vakawanda vachikurudzira vamwe kuvata nevakadzi vevanhu, kwahi mukadzi weumwe murume anonaka kupfuura wako. Chinoitisa kuti anake chacho chii? Kunaka kunorebwa kutaridza shungu dzokuda kukwigwa, chete. Wako wekumba uri kumutadza iwe muridzi. Chiuno chake chakangofanana nechehure iri rauri kukwira. Iwe ukatarisa zvaunoita naro ukanoitawo kumba, unotoona kuti wako ndiye anotonaka. Wako akavata nefuza yakaita sewe inongotiwo anonaka kupfuura wayo wekumba. Saka hapana nyaya apa, Munhu dzidza kugutsa mukadzi wako mumba iye agokugutsawo.
Hino vanhu vanohura havangodi kuhura nomunhu umwe chete anenge ane zvikomba zvakati wandei. Vese vachiunganidza urume hwavo imomo vachigovanawo nevamwe. Yotoita seSwimmingpool yeurume. Angodawo kudhidha imomo odhidha kwahi nokuti mai ava vanonaka.
Mabvumawo ka kuti zvinosemesa. Unoenda kumba kwako urume hwa Johwanisi hwakaomera pachombo chako wonosvikogeza wambodhiraivha mota yako awa yese une urume hweumwe murume mubhurugwa rako. Uya mukadzi ahura haana basa nazvo imi varume ndimi mapenzi muri kuzorerana urume. Mukadzi anotoda urume hwemurume waasarudza kuti amurhoje saka hapana dambudziko.
Ndosaka vanoziva vachiti kuhura kunoitiswa nokushaya SELF RESPECT. Munhu zviwanirewo mukadzi wako akati tasa ugogara naye muchiita zvamunoda kuita. Chero ukazadza urume kuseni ukazodazve kupinza masikati unopinza muurume hwako hwawasiya kuseni.
Vakadziwo kana uchida kuiswa nguva dzese dzidzisa murume wako kuisa akuise zvinokugutsa. Sex breeds sex saka muviri wako ukajaira kurhojana, unoita zemo kakawanda, saka kuzotsvaka vamwe unenge washayei?
Same man iyeye ari kuhura nomukadzi weumwe murume kumba kwake haagutsi mukadzi wake. Ndiko kazhinji ikako. Mukadzi wake ari pazhara chaiyo inotoda UN relief Fund kuti ipindire. Ipapo anozvirova dundundu kwahi ndarhoja gero rangu kureva mukadzi wemunhu amuka azere urume iwe ndokunonyikawo imomo. Zvakangofanana nokuti wowana kapu izere urume hwaani zvake iwe wotora wozora semafuta pachombo chako. Munhu farirawo chombo chako nepurezha yachinokupa kana mukadzi wako akubvisira bhurugwa. Unofanira kupa rukudzo kuchinhu ichi. Kwete kungoti pese pane urume hwevamwe, pane zvigwere, pane chino nechino, iwe wosvika wopinza chako.
Kana ngochani chaidzo hadziiti zvakadaro. Imbwa dzinoita buda ndipindewo. Vanhu kwanai. Shuwa ungabva watouya kumba nourume hweumwe murume wobva wahuisa mukati memukadzi wako here? Kuvhenganisa hwako nehwerimwewo dhinga rausingazivi mukati memukadzi wako. mauchazodazve kupinza mangwana. Koshesa chitubu chomukadzi wako nokuti machiri munokwanisa kuwanikwa mufaro wako, upenyu hwako, urufu gwenyu mese, uye ndipo panobuda nevana vako vachizvagwa. Koshesa panhu apa.
Mukadzi asingahuri akahurigwa nomurume anofanira kutoziva kuti akatombowana urume hwemurume wemukadzi anohura nomurume wake, uye hwevarume vese vamwe vanohura nomukadzi iyeye futi. Kana uchizvifarira izvi chiramba uchihura hako. Asi kune vakawanda zvinosemesa.
Chero ukapfeka jombo pachombo, zvinofanirawo kungokusemesa kuti mauri kupinza munotori nourume hweumwe murume. Uri munhu akaita sei anofungigwa zvokuita nechombo? Tanga wagutsa wako mukadzi usati wafunga nezveuyo weFEDERATION. Kana wako aonekwa kuchipatara achiti akaita mhoni pachitubu saka ari pazororo, kuda ndipo paungatanga kubvunza kuti kune vamwe vekuitisa mhoni here.
Kana wavhenganisa urume hwako nehwevamwe mumukadzi wako chirega hako achitotanga kuhurawo nokuti atova nehwavamwe kare. Kana muchiri kuita vana Ngatisazohwa uchibvunza kuti mwana uyu ndewako here. rega mukadzi ahurewo zvaunoita iwe. SPOUSAL INTEGRITY hapachina mumusha menyu.
Kukwira mukadzi wemunhu kuratidza kuti uri munhu asina kana njere. Wangofanana nemhuka zvayo isingazivi kuti mukati memukadzi uyu mune guchu reurume hweumwe munhu anotorhoja asina kana kondomu.
Uri kuratidzazve kuti haugoni kunyenga vakadzi vasina varume. Kunyika dzechiArabhu kune ISLAM vanouraya vanhu vakaita sewe zvese nomukadzi wacho, kureva kuti zvinoonekwa sokuti mava mhuka.
Asi ukafamba nebhazi muZimbabwe unotohwa murume akasvinura kutarisa, achitozvikudza kuti akanyenga Mai nhingi. Kushaya kuzviremekedza. Murume anotora urume hweumwe murume ozora pachombo chake haana kusiyana nomurume anofongorera umwe murume. Muchihwa vaMugabe vachiti zvakafanana nembwa ndizvo zvavanoreva.
mukadzi weumwe murume
kuiswa nagarden boy
Posted by Mai E Chibwe at 14:53